I-Bulls i-bheke ukuhlala phezulu ngokunyathela i-Cheetahs | Scrolla Izindaba
I-Bulls i-bheke ukuhlala phezulu ngokunyathela i-Cheetahs
I-Vodacom Bulls izozimisela ukubambelela ekuholeni kwayo esicongweni se-log ye-Carling Currie Cup ngoMgqibelo e-Loftus Versfeld.
Ezika-Jake White zihlwithe ukunqoba emihlathini yokuhlulwa ngesikhathi zishaya i-Western Province ngo-22-20 emzuliswaneni owodwa we-Currie Cup eNewlands ngesonto eledlule. Ama-Bulls anesikhathi sokuqina samasonto amabili lapho ezobhekana khona nokuvikela i-Champions Cheetahs nama-Sharks.
I-Cheetah ibheke ukuthi inciphise igebe phakathi kwawo nezinhlangothi ezintathu eziphezulu ku-log.
Iqembu lasekhaya belisefomini enhle ngokunqoba okuyisithupha emidlalweni eyisikhombisa selokhu kuqale isizini ngoMfumfu, kodwa bazobe bexwaya i-Free Staters, ezishaya isifuba ngamalungelo okuqhosha njengoba kuwukuphela kweqembu elizobachitha kule sizini.
Ukwengeza kulokhu, i-Cheetahs inqobe imidlalo emibili edlule ye-Currie Cup phakathi kwala maqembu ePitoli.
UWhite wenze izinguquko ezimbalwa esikwatini sakhe ngoKurt-Lee Arendse noDavid Kriel bashintshela emuva nangakwesokudla ngokulandelana, kanti uMarco Jansen van Vuren uzoqala ophikweni lwesobunxele.
Kukhona ukumataniswa okusha kwe-halfback njengoba uMorné Steyn ebuyela ku-flyhalf noEmbrose Papier ephethe isiteshi sakhe sangaphakathi se-scrumhalf.
Phakathi kwabaphambili, uSintu Manjezi (ukhiye) uzoqala umdlalo wakhe wokuqala, kanti emgqeni wangaphambili ubona izinguquko ezimbili, zombili zilandelana, noMarcel van der Merwe noGerhard Steenekamp bazoqala.
“i-Cheetahs yilona kuphela iqembu elishaye emzuliswaneni odlule, ngakho-ke silibheke ngabomvu leli,” kusho uWhite.
“Ngijabule nangezinguquko esizenzile eqenjini lethu, futhi ngizimisele ukubona inhlanganisela yethu entsha,” uyasho.
Ekhempini ye-Cheetahs uVictor Sekekete (ohlangothini) uzoqala ukudlala kwi-Free Staters, kanti uGeorge Cronjé (ohlangothini), obesadlalela iqembu le-SA Schools ngonyaka odlule, kulindeleke ukuthi aqale ukubonakala uma ezongena enkundleni.
Umqeqeshi we-Cheetahs uHawies Fourie wenze izinguquko ezimbili eziphoqelele ukulimala eqenjini lakhe kusukela ekuhambeni kwabo kokugcina ngasekupheleni kukaLwezi, kwathi uSekekete wagcwalisa isikhala esashiywa nguSpringbok Oupa Mohoje noKhutha Mchunu (i-prop) bangena kuHencus van Wyk.